कस्तो केश भएको मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? आफै पढौं । « Mazzako Online
कस्तो केश भएको मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? आफै पढौं ।
मज्जाको अनलाईन समाचार, माघ २, काठमाण्डौं
मानिसको केश ब्यक्तिपिच्छे भिन्न हुन्छ । मानिस जन्मदै केशको रुपरंग आफ्नै खालको हुन्छ भने ब्यक्ति स्वयंको आनीबानी एवं शोखले केशको ढाँचा फरक देखिन्छ ।
कस्तो केश भएका मानिस कस्ता हुन्छन् ?
जसको केश पातलो छ, उ बुद्धि र बिबेकको धनी हुन्छ । बुद्धि र बिबेकलाई पन्छाएर उसले कहिल्यै कुनै का म गर्दैन । त्यसैले होला पातलो केश हुनेलाई भाग्यमानीको श्रेणीमा राखिन्छ । हल्का पहेलो केश भएका मानिस मृदभाषी हुदैनन् । यस्ता मानिस चलाख त हुन्छन् नै साथ साथै कडा मिजासका समेत हुन्छन् ।
भेडाको उनजस्तो केश घुम्रिएका मानिसहरु अत्मकेन्द्रित स्वभावका हुन्छन् । आत्मकेन्द्रित स्वभावले उनीहरुलाई धुर्त र महत्वकांशी बन्न प्रेरित गर्छ । सरल केश भएका ब्यक्तिहरु आत्मकेन्द्रित हुदैनन् । उनीहररुलाई समेत ध्यान दिन्छन् । उनीहरु मिजासिला हुनुका साथै रमाईला प्रवृत्तिका हुन्छन् ।
महिलाहरुको हकमा पातलो, कालो एवं चम्किलो केश भएकाहरु भावनात्मक प्रवृतिका हुन्छन् । केश विन्यासको ढाँचाले समेत मानिसको आन्तरिक प्रवृत्ति झल्काउछ । केही मानिस केशलाई अस्तब्यस्त राख्छन् । यस्ता मानिसहरु अरुका बारेमा त लापरवाही गर्छन नै आफ्नै बारेमा पनि सजग हुदैनन् । छोटो चिटिक्क परेको केश राख्ने मानिसहरु संकल्प र दृढताले भरिपुर्ण हुन्छन् । उनीहरुको ब्यक्तित्वपनि बहुप्रतिभाशाली हुन्छ ।